Imibuzo ebuzwa rhoqo • I-Strawr Camera Straps
Sivulekele ishishini. Uhlaziyo lwe-COVID-19
Ukuhanjiswa simahla kwii-Odolo zase-US $ 25 + • Ukubuyiselwa kweSuku lwe-30 • IWaranti yoBomi
Esi sigqibo siya kuba lula ukuba wena Cofa apha.
Ngaba iM Series ye-M1 iya kukhawuleza-ikhiphe ngaphandle kwengozi?
Hayi ze kubonwa okanye kuvile oku kwenzekayo.
Ukuze uzikhulule, kufuneka usebenzise uxinzelelo kumacala omabini omnxibelelwano ngexesha elinye. Akunakwenzeka ukuba bakhululwe ngokungenakuzenzela.
Fumana okunye malunga ukukhutshwa okukhawulezayo esisisebenzisayo.
Ixesha lexesha lakho iwaranti?
Sima emva kwezinto zethu kunye nokusebenza kwithuba lokuphila kwento. Iinkcukacha ezingaphezulu zethu iphepha lewaranti.
Uyithumela phi? Ziziphi iinkqubo zakho zokuthumela?
Sithumela Ehlabathini lonke esitolo sethu eNew Jersey, eU.SA. Ukufumana ulwazi oluninzi, jonga ngathi Iphepha lokuthumela.
Kuthekani ukuba andithandi?
Sinomgaqo wokubuyisela ovulekile. Iinkcukacha ezingaphezulu zethu ukubuya kwiphepha.
Ndingayifaka njani iqhosha kwikhamera yam?
Jonga lwethu kwenziwa kanjani icandelo.
I-DHL Express kwihlabathi liphela, $ 40